मनकामना यात्रा, भुकम्प पछिका तिता मिठा अनुभव - Ghumante
by Sujan Gautam | Feb 16, 2016 | Featured, Hiking, News, Pilgrimage |0comments
श्री गणेश : ( यात्रा अघिका कुरा)
मनमा तरङ्ग, बितरङ्गहरु जोश, शक्ति र बिश्वास अनि अाट `घुमन्ते´ नामै यस्तै छ । धेरै जस्तो अन्य कार्य र पढाईमा ब्यस्त हुने भएकै कारणले सनिवार वा अरु बिदाका दिन घुम्न निस्किने बानी । बानी भन्दा पनि लत नै लागिसक्यो भन्दा ठिक होला । युवा अवस्था जोश –जागर र अाट गर्ने बानी को त कुरै नगरौ । वर्षा को मौसम यसपालि घर मात्र बसिराख्न अल्छी लाग्ने । लगभग ४० वटा जिल्ला घुमेको अनुभव बटुल्दै नजिकै ४० कि मिमा (दमौली बाट ) अवस्थित मनकामनाको हिडाइ गर्ने योजना पारित भो हामी दुई साथी बिच । सनिवार भनिएको हिडाइ कारणवस शुक्रबार नै गरौ भन्ने धारणा अर्का घुमन्तेको । सनिवार भनिएको यात्रा को ठिकठाक तयारि गर्न नपाउदै शुक्रबार नै झोला र क्यामेरा बोकि हिडियो । भन्ने गरिन्छ नि ” Travelers do not plan their destination they just travel around. ”
Travellers do not plan their destination they just travel around.
अब अघिको यात्रा आफै पढ्नुस ।
धार्मिक दृष्टिकोणले ज्यादै नै महत्व बोकेको मनकामना मन्दिर हिन्दुहरुका लागि पुग्नै पर्ने धर्मिक स्थल । जहाँ बर्सेनि हजारौंले आफ्ना मनोकामना एवम् कयौं भाकल पूरा होस भनेर धाउने गर्दछ्न । अरुको जस्तो अथाह मनोकामना नभएपनि केही प्राथना त माग्ने सोच पनि थियो मनकामना माइको सामु । बैशाख १२ र २९ गते गएको महाभुकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा जिल्ला र गोरखा जिल्लामा अवस्थित मनकामना मन्दिर । त्यसैले यस यात्रामा धार्मिक पाटो मात्र जोडिएको छैन । भुकम्पले चर्काएको र हल्लाएका घर, गोठ, स्कुल र मनकामना मन्दिरको पनि बेग्लै कथा जोड्न खोजेको छु ।
भुकम्पले चर्काएको र हल्लाएका घर, गोठ, स्कुल र मनकामना मन्दिरको पनि बेग्लै कथा !
घरबाट अलि अबेर हिडियो तर पनि आबुखैरेनी बाट उकालो लाग्दा बिहानको सात बजेको थियो । मर्स्याङ्दि र दरौदीको संगम भन्दा अलि तल बाट झोलुङ्गे पुल तर्दै कानटार गाउँ बाट ठाडो उकालोको पैदल यात्रा सुरु भयो ।
यात्रा सुरु गर्न पनि हामी एकदम नै उत्साहित थियौ ।
(आबुखैरेनी -कानटार -बनौती -डाडागाउँ -फेनाम्दी -ढाडबारि –मनकामना मन्दिर)
उकालोबाट तल मर्स्याङ्दि हेर्दा सेतो सिरकले अोडेर बसेको जस्तै देखिन्थ्यो ।
आबुखैरेनी बजार नजिकै रहेकाले स्थानीय मनुवाहरु रोजगारीका लागि बजार झर्दै थिए । बनौती गाउँ टेक्न साथ बुढा आमाबुवाहरु पसुभाउका निम्ति घासका भारी बोक्दै हिडेको देखियो ।
पसुभाउका निम्ति घासका भारी बोक्दै
आधा घन्टाको हिडाइ पछि पहिलो विश्राम स्थल हाम्रा लागि बनौती नै बन्यो । आडमा रहेको चिसो पानीको धारामा तिर्खाएको मुख तेर्सायौ र साथमा लगेको हल्का फास्टफुड खायौं । त्यस बखत स्थानीयले हामिलाइ मनकामनाको यथार्थ अवस्था बारे जानकारी दिए । त्यसपछि त झनै यस हिडाइको महत्व बढ्यो हाम्रा लागि । धेरै जङ्गलको बाटो, सानो हुँदा आएपनी अहिले बाटो, घुम्तीहरु अन्जान जस्तै भैसकेको थियो । बनौती गाउँ कानटार बाट उक्लेपछी पुगिने पहिलो गाउँ हो । लगभग २० घरधुरी रहेको यस गाउँमा एक प्राथमिक बिद्यालय पनि रहेको छ । छोटो विश्राम सहित बनौती गाउँको अनुहार मनमा कार्बन कपि गरेर हाम्रो पाइला डाडागाउँ तर्फ लम्कियो । डाडागाउँ नाम जस्तै अल्लि अग्लो भागमा अवस्थित रहेको छ ।
त्यहाबाट तनहुँका याम्पाफाँट, एक्लेफाट, छिम्केस्वरी लगाएत गोर्खाका भिराला गाउँहरु पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । डाडागाउमा एउटा चिया पसल थियो जुन अहिले पनि रहेको रहेछ । सानामा आउँदा बनौती र डाडागाउमा थुप्रै चियापसल र साना होटेल हरु संचालनमा थिए तर अहिले ती सबै बन्द भैसकेका रहेछन् । ती घरमा मान्छेको भन्दा नि बढी बास धमिराको थियो । हिडेर मनकामना जाने तिर्थालुहरु आजभोलि घटेका रहेछन्, सायद केबलकारको प्रभाव पनि होला । हामी जादा पनि सुनसानै थियो यो बाटो । हालचालै गएको महाभुकम्पका कारण यस क्षेत्रका थुप्रै घरहरु चर्केको पाइयो । धेरै घर त बस्नै नहुने गरि क्षति पुगेको थियो । केही मानिसहरु त गाउँ नै छोडेर तराई गएर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भो स्थानीयबाट । पक्कै पनि गरिबी अवस्था झेलिरहेका यस स्थानका मानिसहरु, भुकम्प पछि झनै दयनीय अवस्थामा पुगेका रहेछन् ।
यस्तै सोचहरु र पुराना यादहरु सम्झदै उकालो चढियो, बाटोमा देखिएका चराचुरुङ्गी, सुन्तला बारिहरुले भुकम्पले लगाएको घाउमा मलम लगाए झै भान भो हामिलाइ । करिब डाडागाउँ बाट एक घन्टाको पैदल यात्रा पछि पुगियो फेनाम्दी गाउँ । वर्षा यामको बेला भएरै होला त्यो दिन बिहानैबाट घाम देख्न पाइएको थिएन । फेनाम्दी पुगेपछि चाहिँ पारी –पारी डाडाहरुमा घामको किरण देखियो । फेनाम्दी गाउँ अल्लि माथि उक्लेर हेर्दा एकदम सुसज्जित देखिन्थ्यो । पहिलाका ढुङ्गाका छाना अहिले टिनले रंगिन भएका रहेछन् ।
बटुवा संगै सोध्दै खोज्दै भयपनी हामी मनकामना बाटो छोडेनौ ।
एकछिन पछि त भयंकर थकान महसुस भो हामिलाइ । सोच्न थाल्यौं कि सायद भुकम्पले मनकामना मन्दिर नै पर धकेले छ । करिब बिहानको दस बजेतिर ढाडबारि पुगियो । स्कुल जाने समय भएकाले विद्यार्थीहरुको ठुलो जमात नै दौडिदै थिए बाटोमा । बिचरा विद्यार्थीहरु भुकम्पले चर्काएको ती माटा र ढुङ्गाको बिधालयमा पढ्न बाध्य थिए । स्थानीयहरु लगभग सबै आफ्ना हतियार कुटो कोदालो बोकि खेत तिर लाग्दै थिए । यस्तै रमाइलो पलहरु क्याप्चर गरेर हामी ढाडबारि बाट उकालो लाग्यौं । ढाडबारिको छेउ मा आइपुगेसी बल्ल मनकामना मन्दिर आसपासका लस्करै बसेका घरहरू देखापरे । त्यसपछि करिब २० मिनेटको हिडाइ पछी हामी मन्दिर क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्यौ ।
लाम्बध लागेका ढुङ्गाका र माटाका घर, इटा र सिमेन्टका घर सबै घरहरु चिरा परेको बाहिरै बाट स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । कोहि त्यही घरहरुमा बस्दै थिए भने कोहि पाल टागेर । त्यही पनि मनमा एक प्रकारको उत्साह र रमाइलो थियो हाम्रो । यत्रो विनाश बाबजुद पनि पसलेहरु पसल खोलेर पुजा सामाग्री, धुप, अक्षता, नरिबल बेचिरहेका थिए भने व्यवसायीहरु होटेल खोलेर यात्रीको पर्खाइमा ।
अघि बढीरहेको हाम्रो पाइला एक्कासि मन्दिर अगाडि पुगेर रोकियो ।
मन्दिर हाम्रो अगाडि नपाउदा एकछिन त अचम्मित भयौं ।
आखिर कुरा बुझ्दा त भुकम्पले आधा भत्काएको मन्दिरको सुरुदेखि नै पुनर्निर्माण गरिदै रैछ । मन्दिर भएको ठाँउमा जस्तापाताले घेरेर काम भैरहेको पायौं हामीले । फेरि आर्को सोच आयो मनमा यत्रा बर्ष देखि भक्तहरुको मनोकामना पूरा गर्दै आएकी मनकामना माइ, अब उनको मनोकामना चाहिँ कस्ले पुरा गर्देला ? त्यसै अनुरुप धेरै नभएपनी सक्दो सहयोग र दान गर्यौ मनकामना मन्दिर बिकास कोषलाई । र हाम्रो मात्र होइन सम्पुर्ण मानिसहरुको सहयोगको खोजीमा छिन् होला मनकामना माइ । हाल पुजा चाहिँ पहिलेको मन्दिर भन्दा बायाँ तर्फ रहेको सानो मन्दिरमा गरिदो रहेछ । धेरै नभएपनी फाट फुट रूपमा भक्तजनहरुको चहलपहल देखिन्थ्यो वरिपरि ।
त्यसपछि हामी वरिपरिका संरचना, सुन्दरता र जिवनकलाहरु अवलोकन गर्न लाग्यौं । भेटिएका एक जना चटपटे दाइले बयान गरे भुकम्पबारे हामिलाइ । उनका अनुसार बैशाख १२ गते सनिवारका दिन मन्दिरमा ठुलो घुइँचो थियो रे तिर्थालुहरुको । करिब पाँच हजारको संख्यामा थिए रे । निन्याउरो अनुहार पार्दै भने उनले, एक्कासि आएको भुकम्पले मेरो ठेला नै पल्टाइदिएको थियो, मान्छेहरुको भागाभाग कोहि चिच्याउदै थिए रे, कोहि बाटो मै सुतेका पनि । त्यस भुकम्पले मन्दिर पुरै ढल्केको थियो रे अनि २९ गतेकोले चाहिँ भत्कायो । घर भत्किएर लाग्दा करिब ४ जनाको मृत्यु पनि भएको रहेछ । चटपटे दाइको मात्र नभएर पुरै स्थानीयको अनुहारमा त्यति चमक थिएन ।
स्थानीयको अनुहारमा त्यति चमक थिएन खाली बोक्रे हासोले आफ्नो खुसी व्यक्तगर्न चाहन्थे
यस्तै धेरै नमिठा बिपनाहरु साच्दै हामी खाना खान हिड्यौ । करिब १०० भन्दा बढी होटेल रहेको यस क्षेत्रमा खानाका परिकार पनि थुप्रै थिए । घुमन्ते भएका कारण खानामा पनि अलि बढी नै चाख लाग्छ । त्यसै अनुरुप अल्लि तल झरेपछी (केबलकार स्टेशन तर्फ ) एउटा भाइको मिठो भाका सुनियो । ती भाइ आफ्नो होटेलमा खाना खानका लागि यात्रीहरुलाइ बोलाउदै थिए र यसो भन्दै थिए :
(ए हजुर ! कता ? आउनुस यता । चट्ट लाएर सुन्तलाको बोट मुनि बसेर, सादा खाना तातो घ्युले च्वाई पारेर । खाजा सेट, ढिडो, गुन्द्रुक, त्रिसुलि को माछा सबै पाइन्छ यहाँ ।)
भाइको बोलिमा फिदा हुँदै हामी त्यही खाना खान रोकियौ । सोचेको भन्दा धेरैहिंडेको भान भो हामीलाई । धेरै ठाँउमा विश्राम लिदै करिब ४ घन्टा ३० मिनेटमा आइपुगेका थियौ मन्दिर । खानापछि स्थानीय पसलहरु नियाल्दै हामी लाग्यौ केबलकार स्टेशन तर्फ । स्टेशन पनि सुनसान थियो , धेरै मान्छे नभएका कारण केबलकार पनि समय अनुसार मात्र चलाउदा रहेछन् । साझ हुन लागेको थियो दिन ढल्कनै लाग्दा हामी केबलकार मार्फत कुरिनटार झर्यौ । हुन पनि यस केबलकारले सम्पुर्ण तिर्थालु एवम् स्थानीयलाई धेरै सहयोग गरेको छ । तर यसको बेफाइदा पनि हामिले देख्न पायौं यस यात्रामा । यस्तै तिता मिठा अनुभव बटुल्दै यस यात्रा सकिन लागेको थियो ।
प्रचार र प्रबर्द्धनको पर्खाइमा आपचौर झरना
कुरिनटारबाट हामी बस त चढ्याै तर घर पुगेनौ , हामी यस यात्राको थकान, हतासापन केही मेटाउन भएपनी आबुखैरेनी र मुग्लिनको बिचमा रहेको आपचौर झरनामा रोकियौ । धेरै मानिसहरूले बाटोबाट नै अवलोकन गर्दछ्न तर माथिनै गइ यसको पानीमा भिज्नुको मज्जा छुट्टै छ । तनहुँको एक अग्लो झरना मध्य पर्ने यस आपचौर झरना प्रचार र प्रबर्द्धनको पर्खाइमा छ । अविरल बग्ने कन्चन झरनासंग रुबरु हुदै करिब एक घन्टा पछि हामी त्यहाँबाट बस चढि यस पटक चाहिँ घरनै फर्कियौ ।
इतिश्रि : ( अन्त्यमा )
अन्त्यमा भन्नुपर्दा यस हिडाइ एकदम फलदायी रह्यो हाम्रा लागि । धेरै कुरा जान्न , सिक्न, र भोग्न पायौं । एक पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्व बोकेको यस क्षेत्रको अब पुनर्निर्माण र संरक्षण जरुरी छ । अरुको मुख ताक्न भन्दा पनि आफैले सक्दो काम गर्न जरुरी देख्छु म । त्यसैले त म सानो सहयोग गर्न भए पनि घुमिरहन्छु नेपाल ! तपाईंहरु घुम्नु हुन्न ? आगामी दिनहरुमा अर्को नयाँ ठाँउ, नयाँ अनुभव र नयाँ कथाका साथ उपस्थित हुनेछु । Stay tune Ghumante.Com and keep travelling , keep exploring and keep clicking . Dream, Dwell and Discover . धेरै धेरै धन्यवाद मेरा अर्का घुमन्ते मित्र बिकास दरै लाई । सायद उहाँको साथ बिना यस हिडाइले मुर्तरुप लिने थिएन । साथै फोटो हरु र केही सब्द का लागि पनि म आभारी छु ।
जय घुमन्ते ! जानकारी : जिल्ला – गोरखा अञ्चल – गण्डकी उचाई – १३०३ मि ( लगभग ) लाग्ने समय – ४-५ घन्टा ( हिडेर ) १० मिनेट (केबलकार ) नजिकको बजार : आबुखैरेनी , कुरिनटार दुरि : काठमाडौं ( १०० कि मि ) पोखरा ( १०० कि मि ) नारायणगढ ( ५१ कि मि )
अधिक जानकारीका लागि : 9815140787 / 9846499773
Bikas and Tsujan are two fellow ghumantes from Damauli who are next door neighbors too. Both of them share the passion of travelling and photography . Tsujan isacheerful friendly guy and also good writer/poet. Nicknamed “Love Struck Romeo”, he is alsoagood crikcet player. Bikas on the other hand isawitty and creative. He is alsoatalented drummer and “Maya ko Baadal”(Clouds of Love) is his current favorite song from the movie Kabaddi Kabaddi. “Bikas listens to it day in day-out”, adds Tsujan.